नेपकोरले छुसकको दोस्रो दिन 'व्रिजेश एन्ड वियोन्ड लाइभ इन सउल' गर्ने - Fonij Korea
नेपकोरले छुसकको दोस्रो दिन ‘व्रिजेश एन्ड वियोन्ड लाइभ इन सउल’ गर्ने
कोरियन चाड छुसकको अवसरमा नेपकोर ग्रुपले सेप्टेम्बर १३ तारिख अर्थात छुसकको दोस्रो दिन BRIJESH & BEYOND LIVE IN SEOUL डान्स पार्टीको आयोजना गर्ने भएको छ । दक्षिण कोरियामा रहेको नेपाली युवाहरुको समूह नेपकोरले लामो सयम देखि मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गर्दै सामाजिक कार्यहरु गर्दे आएको छ ।
छुसकको दोस्रो दिन हुने कार्यक्रममा BRIJESH & BEYOND साथमा डिजे J-WOW को साथ रहनेछ । साथै कोरियामै रहेका नेपाली तथा काेरियन DJ काे साथमा मनोरञ्जन दिदै आएको यो ग्रुपले बिगतको केही बर्ष देखि दर्शकको रोजाइ अनुसार नेपाली कलाकारलाई कोरिया ल्याएर कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
नेपकोरले यस अघि मन्त्र ब्यान्ड, रबिन एन्ड रिभोलुसन, युवाहरूले रुचाएका गायक स्वप्न सुमनलाइ काेरियामा ल्याएर प्रस्तुती मार्फत दर्शकलाइ मनाेरञ्जन दिइसकेका छन् । दर्शकहरुको सहजताको लागि अनलाइन टिकट बुकिङ गर्न सकिने पनि आयोजकले जनाएको छ । बुकिङको लागि www.nepkor.com मा लगइन गर्न सकिनेछ ।
कार्यक्रम गाङनामको H2O Night Club मा हुनेछ भने दोङ्देमुनकाे गेट नं. ३ बाट कार्यक्रमस्थलसम्म जानको लागी बसको ब्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रम स्थल जानको लागी मेट्रो लाईन नं. ७ छङडाम स्टेशन गेट नं. १३ वाट ५ मिनेट पैदलै हिडेर जान पनि सकिन्छ ।